Xaasaskii Rasuulka scw iyo Hooyooyinkii Mu’miniinta | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Dheecaanka Ku Jira Isgalka Lafaha
Khaalid Caskar — July 15, 2018
Waa dad ay tahay inaynu baranno oo wax ka ogaanno nolohoodii. Akhriste; haddii aanad hore si fiican ugu wada aqoon xaasaskii rasuulka, nasiib ayaad leedahay saacaddan, akhri oo baro.
Waxa uu rassuulku guursaday intii uu noolaa kow iyo toban ilaa laba iyo toban dumar ah. Noloshiisa intii u danbaysay waxa isku soo gaadhay sagaal xaas. Saddex ama laba kamid ah waxay ay dhinteen isaga oo nool.
Xaasaska nebigu waa hooyoonkii mu’miniinta sida ilaahay uu ku sheegay aayadda 6 aad ee kamid ah suuradda Al-axzaab. Xaasaskii nebigu innaga oo si kooban uga hadli doonna waa kuwan:
Khadiija Bintu Khuwaylad RC
Nebigu scw waxa uu khadiija guursaday isaga oo 25 sano jir ah, iyaduna ay 40 sano jir tahay. Dhammaan caruurta uu dhalay rasuulka waxa u dhashay Khadiija, marka laga reebo Ibraahiim (Halkan ayaan soo gelin donnaa maqaal si gaara uga hadlaya caruurtii rasuulka scw).
Nebigu N.N.K.H Khadiija lama uu gursan cidna intii ay noolayd. Khadiija waxay ahayd haweenay ganacsto ah maadaama ay qurayshi ahaayeen dad ganacsato ah, Khadiija Bintu Khuwaylad markii uu nebiga kasoo gaadhy warka ah in nebigu scw yahay qof run-sheeg badan, ammaano leh oo akhlaaq wanaagsanna ku tilmaaman ; waxay Khadiija u dirtay cid, una sheegtay inay hawlo ganacsi ugu diri doontodhulka Shaam ayna siin doonto mushqaayad aanay siin cid isag ka horraysay. Nebigu scw wuu ka aqbalay Khadiija codsigaa, sidaa wuxu ku noqday mid Khadiija kala shaqeeya ganacsigeeda. khadiija waxa ay ahayd tii ku garab gashay nebinimadiisa, waxay ahayd tii niyadda u dejisay markii ay ku soo dageen Aayadihii ugu horeeyay ee qur’aan ah, una sheegtay in Allaah aanu hoojinayan, maaddaama uu yahay qof naxariisbadan, dadka oo dhanna u gar-gaaraa, waxayna u hurtay nafteeda iyo maalkeedaba. Allah swc ayaa Khadiija salaan ugu soo dhiibay Jibriil taas oo kamid ah dheeradkii ay lahayd hooyadii mu’miniinta ee khadiija.
Allah raali haka ahaadee saddex sano kahor hijradii rasuulka, bishii Ramadaan sannadkii 10aad ee nebinimada ayaa la oofsaday Khadiija, waxana lagu aasay meesha lagu magacaabo Al-xujuun iyada oo 65 sano jir ah.
Zawda Bintu Zamcah RC
Sawda waxa ay agjoogtay oo ay xaaskiisa ahayd nin la odhan jiray Sakraan Ibnu Camar, way wada islaameen waxayna kamid ahaayeen saxaabadii u hijrootay dhulka xabshida, markii ay kasoo noqdeen hijrada ayuu dhintay Sakraan, markaa kaddib ayuu guurasaday rasuulku N.N.K.H, bishii shawaal sanadkii 10aad ee nebinimada oo ahayd bil kaddib dhimashadii khadiija. Hooyadii mu’miniinta ee Zawda waxay ku dhimatay magaalada Madiina bishii Shawaal sanadkii 54 ee taariikhda Hijriyada.
Caa’isha Bintu Abii Bakar RC
Runbadantii uu dhalay runlawgu; Caaisha, waxa uu guursaday rasuulku bishii shawaal sannadkii 11aad ee nebinimada hal sano kaddib guurkii Zawda, waxayna Caa’isha xilligaa ahayd 6 sano jir. 3 sano kaddib ayuu nebigu laguri galay Caaisha iyada oo sagaal jir ah, waqtigaasi oo ahaa todoba bilood kaddib hijradii rasuulku u hijrooday magaalada Maddiina Almunawara.
Nebigu N.N.K.H muu guursan gashaanti aan iyada ahayn, waxayna ahayd tii uu ugu jeclaa haweenkiisa, waxay ahayd gabadhii ugu fiqhiga iyo cilmiga badnayd haweenkii umadda nebi Muxammad, waxay ahayd gabadhii ilaahay kasoo beriyeelay toddobada samo dushooda, kaddib markii ay ku been abuurteen qaar kamid ah munaafiqiintii (Kuwii kufri caloolaadka qabay) ee xilligaa lanoolaa rasuulka N.N.K.H. Caaisha waxa dhalay khaliifkii koowaad ee islaamka Abubakar Al-siddiiq.
waxana la oofsaday 17-kii Ramadan sannadkii 57-kii hijrada, laguna aasay xabaalaha Baqiic.
Xafsa Bintu Cumar Bin Al-khaddaab RC
Hooyadii mu’miniinta ee xafsa waxay nebiga kahor lajoogtey nin la odhan jiray Khaniis Bin Xudaafa kaas oo u dhintay dhawaac kasoo gaadhay dagaalkii beder, markaa kaddib ayuu guursaday nebigu N.N.K.H bishii Shacbaan sannadkii 3aad ee hijrada, Xafsa waxay ahayd Inantii uu dhalay khaliifkii 2aad ee islaamka Cumar Bin Khaddaab ( Cumar Al-faaruuq ) , Xafsa waxay ku dhimatay magaalada maddiina sanadkii 45 aad ee hijrada iyada oo 60 jir ah waxana lagu aasay baqiic.
5- Zaynab bintu Khuzayma Al-hilaaliaya RC
Zaynab waxa uu nebigu N.N.K.H guursaday bishii Ramadan sannadkii 3aad ee hijrada, waxa xilligii Jaahiliyada loogu yeedhi jiray Hooyadii Masaakiinta sababtuna ay ahayd inay quudin jirtay una wanaagsanayd dadka masaakiinta ah.
Geba-badii bishii Rabiic Al-thaani sannadkii 4aad ee hijrada 8 bilood kaddib ayay Zaynab ku geeryootay magaalada maddiina waxana lagu aasay xabaalaha Al-baqiic.
Ummu Salama Hinda Bintu Abii Umayya RC
Hinda waxay nebiga kahor u dhaxday Abii Salama iyada oo u dhashay caruur, waxana uu Abii-salama ka dhintay sannadkii 4 aad iyadoo uu nebiguna guursaday isla sannadkaa, ummu salama waxay ku tirsanayd dumarka kuwooda ugu cilmiga badan uguna caqliga iyo garaadka fiican, Allah raali haka ahaadee waxay ummu salama ahayd xaaskii ugu dhimashada danbeeysay xaasakii rasuulka iyadoo geeryootay sannadkii 59 aad ee hijrada iyada oo 84 jir ah.
7- Zaynab Bintu Jaxash Bin Ri’aab RC
Zaynab waxa ahayd nebiga inaabtidii oo waxa dhashay eeddadii Umayma Bintu Cabdil-muddalib, waxay Saynab nebiga kahor u soo dhaxday saxaabigii Zayd Bin Xaaritha, Zaynab waxa ku soo degtay aayad qur’aan ah oo u guurinaysa nebiga waxana ay Zaynab nolosheeda ku faani jirtay oo ay dumarka kale ku odhan jirtay :
“Idinka waxa idin guuriyay eheladiina anigana waxa toddobada samo dushooda iga soo guuriyay Allaah SWC “
waxana guurkaasi dhacay sida ay u badanyihiin culimada siiradu sannadkii 5aad ee hijrada.
Zaynab waxa ay ahayd dumarkii ugu sadaqaysiga badnaa ee dumarkii rasuulka, waxayna ahyd gabadhii ugu horraysay ee nebiga kadaba dhimata sannadkii 20aad ee hijrada iyada oo 53 sano jir ah waxana lagu aasay Al-baqiic.
8- Juwayriya Bint Al-xaarith RC
Waxa lagu soo qafaashay duulaankii Banil-musdaliq, waxayna markaa gacanta u gashay Thabit bin Qays balse nebiga ayaa xoreeyay kaddibna guursaday. xoraynta uu nnebigu xoreeyay Juwayriya oo kamid ahayd reer Musdaliq ayaa waxa ka dhalatay in muslimiintu ay xoreeyaan 100 kamid ah dadkii reer musdaliq ee qaffaalka loo haystay, waxayna yidhaahdeen ” waa xididkii rasuulka ” . juwayriya waxa la oofsaday bishii Rabiic Al-awal sannadkii 56 aad hijrada iyada oo 65 jir ah.
9- Ummu Xabiiba Ramla Bintu Abii-sufyaan RC
waxa uu nebigu N.N.K.H ramla guursaday iyada oo ku jirta hijradii loo hijrooday xabasha waxana meherkeeda oo 400 oo diinaar ahaa bixiyay boqorkii xabashida Asxama Ibnu Al-abjar oo loo yaqaanay NAJAASHI, waxa la oofsaday sannadkii 42 aad ee hijrada.
10- Safiya Bintu Xuyyayi Ibn Al-akhdab RC
Hooyadii mu’miniinta ee safiya waxay ahayd inantii uu dhalay odaygii madaxda u ahaa reer banii Nadiir oo kamid ah Banii israaiil kana soo jeeda dhashii nebi Haaruun, waxa lagu soo qafaashay duullaankii khaybar waxana doortay rasuulka N.N.K.H, nebigu waxa uu u soo bandhigay islaamka waana ay islaamtay intaa kadib ayuu nebigu xoreeyay, waxana uu guursaday furashadii khaybar kaddib sannadkii 7 aad ee hijrada , safiya waxa la oofsaday sanadkii 50 aad ee hijrada waxana lagu aasay Al-baqiic.
11- Maymuuna Bint Al-xaarith Al-hilaaliya RC
Waxay ahayd xaaskii ugu danbaysay ee nebigu guursado bishii dil-qicdah sannadkii 7aad ee hijrada isaga oo jooga magaalada makka , waxa ay hooyadii mu’miniinta ee maymuuna geeryootay waqtigii mucaawiye sanadkii 61 ee hijrada.
Tags: Xaasaskii Rasuulka iyo Hooyooyinkii Mu’miniinta
Next post Maxaad Ka Taqaan 'Jeel Ogaadeen'?
Previous post Wareerayee Ma War Baad Iga Hayseen?